Madaxweynaha Cusub Ee Kenya Uhuru Kenyatta Oo Loo Dhaariyay Xilka – Araweelo News Network (Archive)
Madaxweynaha Cusub Ee Kenya Uhuru Kenyatta Oo Loo Dhaariyay Xilka
Nairobi(ANN)Madaxweynaha cusub ee Kenya Uhuru Kenyatta, ayaa maanta loo dhaariyay xafiiska madaxtinimada dalkaa xafladda Munaasabadda
loo qabtay Uhuru Kenyatta oo ka dhacday garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi, waxaa ka soo qeybgalay hogaamiyayaal ka socda Afrika iyo diblomaasiyiin caalami ah iyo tobanaan kun oo qof.
Musharaxa la tartamayay Uhuru Kenyata ee Mr. Raila Odinga ayaan kasoo qeybgalin xafladda dhaarta Uhuru Kenyatta.
Madaxweynaha cusub ee la dhaariyay maanta Mr. Kenyatta, ayaa loo doortay xilka madaxtinimada bishii la soo dhaafay, isaga oo ka guuleystay Raiisul Wasaaraha xilka hayay Raila Odinga.
Raila Odinga ayaa natiijada doorashada sheegay in lagu shubtay, waxaana uu dacwad ay xisbigiisu geeyeen maxkamadda sare ee Kenya, taas oo markii dambe go’aamisay in natiijada doorashada ay ahayd mid sax ah.
Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto waxay dacwad uga socotaa Maxkamada caalamiga ee dambiyada dagaalka, kadib markii lagu eedeeyay inay sameeyeen doorashooyinkii hore ee dalkaa ka dhacay xasuuq kadib rabshado ka dhashay natiijadii doorashooyinkaa oo ay ku dhinteen kumanaan qof.
Dacwada loo haysto Madaxweynaha cusub ee Kenya iyo ku xigeenkiisa ayaa doodo badani ka taagan yihiin qaabka ay u hortegayaan, maadaama ay yihiin hogaamiyayaal la doortay.
Published April 10, 2013 By info
Madaxweyne Siilaanyo Oo Sheegay In Aanay Hayn Ajandaha Shirka Uu U Boqoolay Ee Wadahadalada Somaliland Iyo Somalia Ee Turkiga
Dadweynuhu Waa Awoodda Ugu Sarraysa Ee Dawlada Dimoqoraadiga Ah:Xukuumadda Dimoqoradiga Ah Iyo Ra’yiga Dadweynaha By Adam Muse Jibril